I-Zucchini kunye neetapile puree | Ukupheka kweKhitshi
I-puree yeZucchini kunye neetapile
UCarmen Guillen | | Cuisine yaseSpain, Iiresiphi zemifuno, Iiresiphi ezisempilweni
Namhlanje ndikuzisa njengeresiphi ibiyintoni isidlo sam sangokuhlwa phezolo. Ukuba awuyithandi imifuno kunye neekhrim ngokubanzi, le recipe ayisiyakho, kodwa ukuba ngokuchaseneyo, uyazithanda izithambiso, ezisulungekileyo kunye izidlo ezinempilo nezilula mhlawumbi le recipe ikulungele. Imalunga ne- zucchini kunye neetapile puree, ilula kakhulu ukuyenza kwaye ityebe kakhulu.
Ndikushiya neresiphi, njengoko uza kubona, ayinamsebenzi omninzi.
1 enkulu zucchini
3 iitapile ezincinci
I-125 ml yomhluzi wemifuno
1 itswele elitsha
I-75 ml yekrimu engamanzi
I-1 isipuni sebhotela
Kwipani yokutshiza nge-oli yeoli, siza kuyongeza yonke itswele ecoliweyo kumaqhekeza amancinci. Xa ifakwe poached (ngenxa yoku kuya kufuneka uyishiye kubushushu obuphakathi kwaye uvuselele amaxesha aliqela) siya kongeza uzucchini (ihlanjwe kakuhle kwaye ayicocwanga) isikwe kwiityhubhu ezincinci.
Ngelixa i-zucchini izingela kunye netswele, siyahamba ukufudumeza imbiza ngamanzi amaninzi. Xa amanzi ebila songeza iitapile ngaphandle kokuxobuka okanye ukusika, siyeke pheka malunga nemizuzu engama-20-25, de sibone ukuba iitapile zithambile. Nje ukuba zithambe, sibeka bucala kwaye sizivumele zipholile ukuze kamva zikwazi ukuzicola ngaphandle kokutsha.
Sinqumle iitapile eziphekiweyo kwiityhubhu, sizifaka kwi yiyo, songeza itswele yethu kunye ne-zucchini esele zibanjiwe kwaye songeza i-125 ml yomhluzi wemifuno. Yiyo le sibetha, kwaye xa umxube wethu uhambelana ngokufanayo sidibanisa i-cream engamanzi kunye nokuchukumisa ibhotolo. Nentwana yetyuwa ... Kwaye sabetha kwakhona.
Ngale ndlela siya kuba ne-puree yethu kwaye sikulungiselele ukufudumeza ngaphambi kokukhonza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yaseSpain » I-puree yeZucchini kunye neetapile
I-Cheese flan kunye nobisi olujiyileyo
Ipasta yemifuno etyiwayo